dinidon Myanmar online shopping
မြန်မာ dinidon online shopping
လျှပ်စစ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
လက်ကားဈေး / လျှော့ဈေး
ကုန်ပစ္စည်း ပုံ စာရင်း
Ver.88 Waterless Hand Cleansing Gel (Hand Sanitizer 75% Alcohol) - 1000ml
ဈေးနှုန်း Ks 19,000
Waterless hand cleansing, Gentle to your skin, Easily adsorb, Curtail 99.99% bacteria growth, Extract from Aloe Vera helps nourish and protect your skin, portable size and regularly use.
Soffell Flora Mosquito Repellent Spray 30ML*3
ဈေးနှုန်း Ks 9,000
Truslen Instant Coffee Mix Powder Coffee Plus Collagen 16g /15pcs
ဈေးနှုန်း Ks 8,000
Diet coffee teeming with skin enhancing
Truslen Instant Coffee Mix Powder Coffee Plus 16g /15pcs
Diet Coffee to burn fat,firm and trim body with the original profound taste
OASIS MOSQUITO REPELLENT GEL LIVELY GREEN - 180g
ဈေးနှုန်း Ks 5,500
OASIS MOSQUITO REPELLENT GEL SPARKLING YELLOW - 180g
OASIS MOSQUITO REPELLENT GEL RELAXING PURPLE - 180g
OASIS MOSQUITO REPELLENT GEL PINK BLOSSOM - 180g
OASIS MOSQUITO REPELLENT GEL OCEAN BLUE - 180g
Lanna Foot Patch - 10 pcs
ဈေးနှုန်း Ks 4,500
ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ရှူဆေး Double-Inhaler
ဈေးနှုန်း Ks 20,000
Soffell Flora Mosquito Repellent Spray 80ML*3
ဈေးနှုန်း Ks 13,000
Soffell Flora Mosquito Repellent Spray 80ML*2
Soffell Flora Mosquito Repellent Spray 80ML*1
ဈေးနှုန်း Ks 5,000
Soffell Natural Mosquito Repellent Spray 30ML*4
Natural plant formula of mosquito repellent, non-alcoholic and other harmful substances, mining effect is mild, soft for the skin, suitable for the whole family and children, home or go out on the convenience.
Soffell Fresh Mosquito Repellent Spray 30ML*4
Soffell Fresh Mosquito Repellent Spray 80ML*3
Soffell Fresh Mosquito Repellent Spray 80ML*2
Soffell Fresh Mosquito Repellent Spray 80ML
Soffell Natural Mosquito Repellent Spray 80ML*3
Soffell Natural Mosquito Repellent Spray 80ML*2
Soffell Natural Mosquito Repellent Spray 80ML
Kalenji SCALE 100 Electronic Scale
ဈေးနှုန်း Ks 19,900
ဝိတ်ချိန်စက် ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုရတာ အရမ်းကို အဆင်ပြေပါတယ်။
Kalenji SCALE 500 Body Fat Electronic Weight Scale
ဈေးနှုန်း Ks 32,000
ဝိတ်ချိန်စက် ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုရတာ အရမ်းကို အဆင်ပြေပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အလေးချိန်၊ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အဆီ၊ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကြွက်သား၊ အရိုးနဲ့ ရေဓာတ်ကိုပါ တိုင်းတာပေးတာမို့ ကိုယ့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အသေးစိတ်ကို သိစေပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ နေ့စဉ် တိုင်းတာထားတဲ့ အလေးချိန်များကိုလည်း မှတ်ထားပေးပြီး ပြန်လည် အသိပေးပါတယ် ... အဆီတွေ ပိုနေကြောင်း လျော့သွားကြောင်း စသည်ဖြင့် ကိုလဲဖော်ပြပေးပါတယ်။ Gym ဆော့နေတဲ့ သူတွေ Body Building လုပ်နေတဲ့ သူတွေအတွက် အထူးပင် အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်နော်။
ROYAL THAI Thailand Natural Latex High and Low Grain Pillow
မူလဈေးနှုန်း Ks 70,000
ဈေးနှုန်း Ks 62,000
ဤခေါင်းအုံးသည်ကျန်းမာရေးခေါင်းအုံးဖြစ်သောကြောင့် ညအိပ်ယာဝင်ရာတွင် ယင်းခေါင်းအုံးကြောင့်အိပ်မပျော်ရခြင်းများဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပါ။ နူးညံ့ပျော့ပျောင်းပြီး အသုံးပြုရာတွင် ကျေနပ်မှုများရရှိစေမှာပါ။ ရှိလေ့ရှိထရှိသော ခေါင်းအုံးပေါ်တွင်ရှိသောပိုးမွှားကိုလည်းလျော့ကျစေပါသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သောခေါင်းအုံးဖြစ်ပါသည်။
ROYAL THAI Thailand Natural Latex Beauty Pillow
ROYAL THAI Thailand Natural Latex Pillow
ROYAL THAI Thailand Natural Latex Beauty Particle-Free Pillow
Patar Ascorbic Acid Vitamin C Tablets 1000 Tablets
ဈေးနှုန်း Ks 12,500
Balm Zingiberacoae ပရုတ်ဆီ - 50g×6 ဗူး
ဈေးနှုန်း Ks 29,000
အအေးမိ၍နေမကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နှာစေးချောင်းဆိုး၊ နှာရည်ယို၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းများကို ပျောက်ကင်းစေပါသည်။ ရှူဆေးအနေဖြင့်အသုံးပြုတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လိမ်းရန်အသုံးပြုတာပဲဖြစ်ဖြစ် အထူးအထောက်အကူပြုနိုင်ပါသည်။ 50g ပါရှိသည့် ဗူ6းဗူး Set ဖြစ်ပါသည်။
စာမျက်နှာ 123 ဒေတာအချက်အလက်များ81
Copyright © မြန်မာ dinidon online shopping All Rights Reserved.
ဖုန်းနံပါတ် （＋669）10 756168
Viber နံပါတ် +66910756168
နေရပ်လိပ်စာ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ တာချီလိတ်၊ ဘန်ကောက် ၊ ချင်းမိုင်၊ မယ်ဆိုင်
Service Time : Monday to Saturday 09:00 - 18:00
Design by Eztrust